Sannad kaddib bixitaankiisa, Wenger oo shaaca ka qaaday inuu xiriir la sameeyay Arsenal.. (Miyuu qorsheenayaa inuu dib ugu soo laabto?) – Gool FM
Sannad kaddib bixitaankiisa, Wenger oo shaaca ka qaaday inuu xiriir la sameeyay Arsenal.. (Miyuu qorsheenayaa inuu dib ugu soo laabto?)
Dajiye September 8, 2019
(London) 08 Sebt 2019. Tababaraha reer France ee Arsène Wenger ayaa shaaca ka qaaday inuu kala hadlay maamulka kooxda Arsenal suurtagalnimada uu markale dib ugu laaban karo Emirates Stadium, sannad kaddib bixitaankiisa.
Arsene Wenger ayaa qirtay inuu lahadlay xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Arsenal laakiin uu ka caga jiidayo inuu ku laabto garoonka Emirates.
Wenger oo 69 jir ah, ayaa ka tagay garoonka Emirates dhamaadka xilli ciyaareedkii 2017/18 welina kuma soo laaban shaqada tababarka, wuxuuna diirada saaray kaliya inuu ka falaqeeyo kulamada laga ciyaarayo kubadda cagta shabakadaha adduunka ugu fiican.
Tan iyo markii uu shaqada ka tagay, tababaraha Faransiiska ayaan ku laaban kooxdiisii ​​hore si uu u daawado kulan kasta ay ciyaareyso Gunners, wuxuuna ku adkeystay inuu doonayo inuu siiyo macalinka cusub ee Unai Emery boos buuxa si uu qabsado shaqadiisa.
Isaga oo la hadlayay shabakada “BN Sport” Arsene Wenger ayaa wuxuu daaha ka qaaday inuu la xiriiray kooxdiisii ​​hore laakiin uusan qorsheyneynin inuu ku laabto Waqooyiga magaalada London.
“Waxaan la xiriiray shaqsiyaad ka tirsan kooxda laakiin waxaan dareemay inay qasab igu tahay inaan meel kale u guuro”
“Waxaan doonayay inaan siiyo tababaraha cusub fursad uu ku qabto shaqadiisa, kana fog cadaadis kasta ee abuuri kara u dhawaanshiyaheyga kooxda”.
“Weli waa xilli hore, laga yaabee, inaan soo laabto. Dib uguma soo noqon kooxda”.
Si kastaba ha noqotee. Arsene Wenger ayaa lala xiriirinayay shaqooyin badan, tan iyo markii uu ka tagay kooxda Arsenal, wuxuuna qirtay inuu iska diiday dalabyo dhowr ah sababtoo ah wuxuu si taxaddar leh uga fiirsanayaa dhaqaaqiisa xiga.
Virgil van Dijk oo ogolaaday inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda Liverpool
Saxiixii ugu horreeyey oo uu Manchester United la doonayey macallin Jose Mourinho kaddib imaatinkiisii Old Trafford oo daaha laga qaaday